ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo loThixo unobhola kunye noMongameli owaziwa kakhulu ngeNqampu; 'UKumkani George'. Indaba yethu yeGeorge Weah yabantwana kunye ne-Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho, ubomi bomtshato kunye nezinye izinto eziziwayo ngeyona nto.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga ne-ballon d'or kunye neLiberia indima ye-Presidency kodwa bambalwa bacinga i-biographie kaGeorge Weah enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UGeorge Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah wazalwa ngo-1st Okthoba 1966 (iminyaka eyi-51), eMonrovia, eLiberia.
UGeorge wenyuswa ngumzala wakhe emva kokufa kukayise. Wakhulela eWest Point, i-shantytown eqhutywe ngamagundane. Uyilungu le Kru luhlanga, olusisichotho ukusuka kumzantsi-mpuma weLiberia County Kru, enye yezona ndawo zihlupheke kakhulu zelizwe.
IGeorge Weah Indaba yabantwana
Waye esikolweni esiphakathi kwi-Congress ye-Muslim kunye nesikolo esiphakamileyo kwi-Wells Hairston High School kwaye kwathiwa waphuma ngonyaka wakhe wokugqibela wezifundo. Waqala ukudlala ibhola ekhatywayo yolutsha lwabaNcinci kwi-15 kwaye kamva wathuthela kwezinye iiklabhu zebhola zebhola zendawo, ecinga iindima zeenkwenkwezi zeMighty Barrolle kunye ne-Invincible Eleven apho wayefumene khona iinjongo ze-24 kwimibono ye-23.
Emva kokunyuka ngamanqanaba abo, i-scout yaseCameroon yambona yamsalela iqela eliphezulu, iYound side FC. I-Cameroun isolezwe nguClaude Le Roy, ibuyele iindaba ze-Weah zamanqanaba kumphathi we-AS Monaco u-Arsene Wenger. UWenger wagijima waya e-Afrika ukuba azibukeke, aze asayine iTaah kwiqela lakhe.
Ngaphambi kokuba umsebenzi wakhe webhola uvumeleke ukuba ahambe kwamanye amazwe, uWah wasebenza kwiLiberia Telecommunications Corporation we-switchboard technician. Waba ngowokuqala, kwaye phantse kuphela, uLiberia ukwenza uphawu eYurophu. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
U-Clar Weah ungumfazi kaGeorge Weah. Ungummi waseMelika waseMerika waseMelika kunye neengcambu zabazali baseJamaica.
Wakhula eFlorida, eU.S., apho ahamba khona amabhinki amaninzi kuquka ivenkile yokutya yaseCaribbean kunye nevenkile.
Ngokweengxelo, uGeorge no-Clar bahlangana e-US kwisebe leBhanki yaseChase apho iClar isebenza njengegosa lenkonzo yabathengi. Umdlali we-AC Milan owayesecaleni wayeye ebhanini ukuvula i-akhawunti xa amehlo akhe ebanjwe iJamaican enhle. Ibali labo luthando lucacile kwaye luye lwaqhubeka lomelela ngakumbi nangona iindlebe ezininzi zokungathembeki.
UClaw, ongefani nabaninzi basetyhini baseCaribbean, ugqoke ngokukhawuleza, akabheki nje kuphela nje ngokuba ngumcebisi oqaqambileyo kodwa umculi omkhulu onokumomothekayo, nakwixesha elibuhlungu, uyakwazi ukuphula iingqinamba. Vala ama-allies achaza yena njengengqiqo kwaye eneentlobo ezikhethekileyo ze-aura. IJamaican isebenzisa amandla amaninzi kumyeni wayo. Bobabini banabantwana abathathu: uGeorge Weah Jr, uTita noTimoti.
UTimothy Weah, unyana ka1995 Ballon d'Or ophumeleleyo uGeorge Weah, usayine isivumelwano sakhe sokuqala neParis Saint-Germain.
Unyana kaGeorge Weah- UTimoti
I-17 eneminyaka engama-phambili ilandela ezinyathelweni zikayise, owachitha iminyaka emithathu kwiqela leLigue 1, ngaphambi kokufudukela e-AC Milan. UTimoti wajoyina i-PSG's academy kwi-2014 kwaye uye wabonakalisa zombini i-U-15 kunye ne-U-19.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Uyise, uWilliam T. Weah, uSr. yayingumatshini ngoxa unina u-Anna Quayeweah wayengumthengisi. Unabantakwabo abathathu, uWilliam, uMoses noWolo.
UGeorge Weah wayengomnye wabantwana abalishumi elinesithathu ngokuphakanyiswa ngumama wakhe othembekileyo ongumKristu, U-Emma Klonjlaleh Brown emva kokuba abazali bakhe bahlukane.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Impumelelo YaseYurophu
Ewe, wayenetalente eluhlaza kunye noqeqesho olusemthethweni. Uah wabonakala eqaqambile emsebenzini wakhe waseYurophu. Nangona kunjalo, umdlali onamandla we-6'2 "wabanjwa ngokukhawuleza kukhuphiswano waza waba ngumdlali onomdla wokubulala.
Ukufudukela eParis Saint-Germain kwazisa kakhulu u-Weah, owancedisa iqela lakhe ukuba liphumelele iNqabiso yaseFrance kwi1993 kunye nesihloko seLigue 1 kwi-1994. Eyona nto ingabonakaliyo ngexesha le-1994-95 lonyaka, wathwala i-PSG kwiFrench kunye neLigue Cup ukunqoba kwaye wagqitywa njenge-Champions League. Emva konyaka, wabizwa ngokuba ngumdlali weAfrika, waseYurophu kunye neFIFA World World's year-a success.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -umlo
I-Weah ivaliwe kwimidlalo eyisithupha yaseYurophu ngokuphula impumlo yomkhuseli wasePortugal Jorge Costa 20 Novemba 1996 kwinqanaba labadlali emva kokuba uMilan adonsele ePorto kwi-Champions League. UWaah uthe waphuthunyiswa ngenxa yokukhungatheka emva kokunyamezela ukuklolodela kohlanga Costa ngethuba lembini yeeMidlalo zeMidlalo yeAlgiki ekwindla.
ICosta iphikile ngokunyanisekileyo ukutyholwa kobuhlanga kwaye yayingamangalelwa ngu-UEFA kuba akukho namangqina angayifumana iingqinamba zika-Weah, kungekhona nabalingani bakhe baseMilan. UWeah kamva wazama ukuxolisa kwiCosta kodwa le nto yahlwaywa yiPutukezi, eyayicinga ukuba izigwebo zokuhlambalaza ngokobuhlanga zazingeniswa kuye kwaye zithatha inkundla yaseLiberia.
Esi siganeko saholela eCosta eqhutywe ngeso lengqondo kwaye emva koko wahlala kwiiveki ezintathu. Nangona le siganeko, u-Weah usayifumana i-FIFA Fair Play Award kwi-1996.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -inkolo
I-Weah iguqulwe ebuKristeni bamaProtestanti ibe yiSilamsi, ngaphambi kokuba iguqulwe. Uthemba uxolo kumaSulumane namaKristu, kwaye athi "Abantu abodwa".
U-Weah uye waqhelanisa neProtestanti.
Ngo-Oktobha i-2017, wabonwa kwicawa evelele yaseNigeria yePastor TB uJoshuwa kunye neSenator yeLiberia yasePrince Yormie Johnson.
TB UJoshua kuthiwa uyimpembelelo ebalulekileyo kwisigqibo sikaJohnson sokuvumela ukuba u-candidate weah we-2017 lonyulo lwaseLiberia.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Unyana Owenene waseLiberia
I-Weah yaba negalelo elikhulu kwimicimbi yelizwe lakhe elikhutshulwa yimfazwe ngenkqubela ngelixa ephakathi kokudlala kwakhe.
Ukuqonda ukubaluleka kwebhola njengamandla okuzinza eLiberia, uWah wasebenzisa i-2 yezigidi zemali yakhe kwihambo, izixhobo kunye neendleko zemivuzo yeqela leSizwe, iLone Stars.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -isimo
UGeorge Weah unomxholo olandelayo kubuntu bakhe.
Amandla: UGeorge Weah uyabambisana, udibanisi, unomusa, ulungelelanisa, uluntu
Ubuthathaka: UGeorge Weah angaba ngumntu ongenakucacisa kwaye unobubele. Ngaphezu koko uyaziphepha iingxabano kwaye unokunyamezela.
Yintoni uGeorge Weah ayithandayo: Ukungqinelana, ububele, ukwabelana nabanye kunye nokugqibela, ubomi obungaphandle.
Yintoni uGeorge Weah ayithandiyo: Ubundlobongela, ukungabi nabulungisa, ukuvakala komsindo kunye nokuvumelana.
Kwiphepha eliqhelekileyo, uGeorge uxolo, ubulungisa, kwaye uyazonda ukuba yedwa. Ukubambisana kubaluleke kakhulu kuye.
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -KaMongameli
UGeorge Weah wagijimela ubongameli baseLiberia njengelungu leNgqungquthela yeDemocratic Change kwi-2005, kodwa walahleka ekuqhubeni ku-Ellen Johnson Sirleaf woBumbano weQumrhu. Kwi-2011, wayesekhokiti ye-CDC, ngeli xesha njengomphathi wongameli, kodwa uSirleaf wahlala eofisini.
Ukungabikho kwemfundo ye-Weah yaba ngumcimbi wenkampu. Uye wabagxeka kakhulu abo bathi akafanelekanga ukulawula. Ekuqaleni wayefuna ukuba ne-BA degree kuLawulo lwezemidlalo kwiYunivesithi yaseParkwood eLondon, nangona kunjalo, oku kungumgubo wokudibanisa ongagunyazisiyo onika iziqinisekiso ngaphandle kokufundwa. Weah ke walingisa iqondo lokulawula ushishino kwiYunivesithi yakwaDevry eMiami.
Nangona iingxaki zezopolitiko, u-Weah uhlala enamandla kakhulu kwaye ethandwa ngabantu basekhaya lakhe. Ngo-Ephreli 2016, Weah wamemezela injongo yakhe yokuqhuba uMongameli waseLiberia okwesihlandlo sesibini. Ibhola likaThixo ekugqibeleni laba nguMongameli waseLiberia ngoDisemba 2017 emva kokutshatyalaliswa NguMongameli uJoseph Joseph Boakai.
QHUBEKA: Siyabulela ngokufunda Iindaba zethu zeGeorge Weah yabantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
Umhla oguqulweyo: Nge-9 kaFebruwari ngo-2018